Ciidamada Ammaanka Oo Gacanta Ku Dhigay Mooto Lagu Xiray Waxyaabaha Qarxa “Sawirro” – Radio Muqdisho
Ciidamada Ammaanka Oo Gacanta Ku Dhigay Mooto Lagu Xiray Waxyaabaha Qarxa “Sawirro”
Mootadani loo yaqaano mooto bajaaj ee lagu soo xiray waxyaabaha qarxa ayaa ciidamada ammaanka ee Soomaaliya waxa ay ku soo qabteen howgal ay ka sameeyeen qeybo ka tirsan degmada Hodan, waxaana maanta lagu soo bandhigay Saldhiga degmada Hodan ee Gobolka Banaaadir.
Goobta lagu soo bandhigay mootadani bajaajka ah ee la rabay in lagu dhibaateeyo dad Soomaaliyeed oo ay ku xirnaayeen walxaha qarxa ayaa waxaa ku sugnaa saraakiisha ciidamada Booliska iyo maamulka degmada ,waxaana sidoo kale lagu guuleystay in miinada laga furo mootada si aysan u dhibaateyn shacabka iyo gawaarida halkaasi ka ag dhawaa.
Guddoomiyaha degmada Hodan C/qaadir Cali Kulane oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in maamulka degmada uu dadaal ugu jiro sidii shacabka degmada looga ilaalin lahaa dhagarta kooxaha nabad diidka ah ay maleegayaan.
Afhayeenka ciidanka Booliska Soomaaliyeed Qaasim Axmed Rooble ayaa faah-faahin ka bixiyay qaabka uu howgalkani u dhacay, isagoo sheegay in qeyb ay ka tahay arrintani dadaalada Hey’adaha ammaanka ay ku doonayaan xaqiijinta amniga.
Ciidamada Ammaanka Ayaa ku mashquulsan dabagalka iyo ka hortaga kooxaha caadeystay dhibaateynta Dadka Soomaaliyeed, iyadoo howlgalo xiriir ah ay ka wadaan magaalada Muqdisho taasi oo ay mahdiyeen Bulshada Soomaaliyeed.